भ्रष्टाचारी शिक्षित हुँदैनन् ? (सम्पादकीय ) | छलफल
नेकपाको सरकार समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय लक्ष्यका साथ अगाडि बढेको छ । प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलतासहित ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र हुन पनि दिन्नँ’ भन्ने उद्गार व्यक्त गरेका छन् । त्यसअनुसार खरदार, सुब्बा र एकाध त्योभन्दा माथिका कर्मचारी र तल्लो तहका जनप्रतिनिधिलाई प्रकाउ पनि गरेको छ । तर, भ्रष्टाचार माथिल्लो पदमा बस्नेहरूले नै गरिरहेका छन्, शिक्षित छु, विद्वत छु, जानेको बुझेको छु भन्नेहरूले नै गरिरहेका छन्, भ्रष्टाचारीलाई उनीहरूले नै संरक्षण दिइरहेका छन् । यस्तो विद्वता र पदको कुनै अर्थ छैन । जतिसुकै विद्वत भए पनि, जतिसुकै ठूलो पदीय जिम्मेवारीमा रहेको भए पनि, जतिसुकै आदर्शवान साहित्यकार, भए पनि निहीत स्वार्थ बोकेर देश र जनताको अहितमा काम गर्ने मान्छे, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, माफिया र तस्करहरू हुन् त्यस्ताबाट समाजको कुनै हित हुँदैन । तर, त्यस्ताहरूलाई अहिले कारवाही पनि हुन सकेको छैन । त्यस्ता राष्ट्रद्रोहीहरूलाई कारवाही पनि हुनुपर्छ, त्यस्तालाई सामाजिक बहिस्कार पनि गर्नुपर्छ, जुन हुन सकेको छैन । अहिले भ्रष्टाचारीको नाममा साना पदका २०÷ ५० हजार लिने बढी कारवाहीमा परेका छन्, करोडांै, अरबौ गर्ने र गराउन प्रोत्साहित गर्ने परेका छैनन् । ठूलाठूला भ्रष्टाचारी,घूसखोरी र तस्करीहरू पार्टीका नेताहरूबाट संरक्षित भइरहेका छन् । यो आश्चर्यको विषय हो किनकी यहाँ भ्रष्टाचार र काला व्यापारीको डरलाग्दो सञ्जाल छ, करोडौं अरबौ भ्रष्टाचार भइरहेको छ, काला व्यापारी, तस्कर र कमिसनखोरहरूको सेटिंगमा वस्तुको मूल्य १०० देखि २०० प्रतिशतसम्म बढेको छ, सरकारी जग्गाहरू पहुँचवालाले हडपी रहेका छन्,सरकारी कामकाजमा ढिलासुस्ती त्यतिकै छ, पार्टीभित्र पदीय भागबण्डा चलिरहेको छ, सरुवा, बढुवा र नियुक्तिमा त्यस्तै चलखेल छ, पार्टीभित्र आफ्ना मान्छेहरूलाई मात्र नियुक्त गर्ने पुरानै परम्पराले निरन्तरता पाइरहेको छ । कमिशनमा कुरा नमिलेर कतिपय संवैधानिक निकायहरूमा अझै आयुक्तहरू नियुक्त गरिएको छैन । यी सबै काम भ्रष्टाचार गर्ने, कमिसन खाने र सम्पति आर्जन गर्ने उद्देश्य अन्र्तगत भएका छन् ।
मुलुक सुशासन र समृद्धिमा जानुपर्ने बेलामा घिनलाग्दा काम, घूस, कमिसन र भ्रष्टाचार झन् बढेको समाचार आइरहेको छ । सरकारी बेरुजु बढ्दै गएको महालेखाको प्रतिवेदनले भनिरहेको छ । सार्वजनिक निर्माणका आयोजनाहरूमा ढिलासुस्ती झन् बढेर गएको समाचार आएको छ, दर्जनौं सडक र पूर्वाधार निमार्ण कार्यले गति लिन सकेको छैन, फजुल खर्चको मात्रा बेरोकटोक बढ्दै गइरहेको कतिपय नेताहरूले नै बताइरहेका छन् । सरकारी निकायमा चरम बेथिति व्याप्त छ, सवारीचालक अनुमति पत्रसमेत वितरण हुन सकिरहेको छैन । सुन तस्करहरूलाई कारवाही हुन सकेको छैन, वाइड बडी घोटाला काण्डका मुख्य अभियुक्तहरूलाई अहिलेसम्म कारवाही भएको छैन, एनसेल कर छली काण्ड त्यसै छ, अरबांै राजस्व छली गर्नेहरूलाई कारवाही गर्नुको सट्टा पुरस्कृत गरिएको समाचार आइरहेको छ । सरकारबाट लिनुपर्ने सेवा सुविधामा ढिलासुस्ती र घूसको प्रचलन यथावत् छ । अर्थात हिजोकै विकृति र विसंगतिले अहिले पनि निरन्तरता पाइरहेको छ । यसमा सुधार ल्याउने कुरामा कसैको ध्यान गएको छैन । यो नेकपाकै इमान्दार नेताहरूले भन्ने गरेको कुरा हो । यसले विगतका सरकारहरूको कार्यशैलीभन्दा अहिले के कुरामा सुधार आयो ? के कुरामा प्रगति भयो ? भन्ने प्रश्न उठाएको छ । त्यतिमात्र होइन, योजना ल्याउने नेता, उच्च प्रशासक, भ्रष्टाचारी र काला व्यापारीहरूको अघोषित कमिसन साँठगाँठ र लेनदेनले मुुलुक आक्रान्त भइरहेको सुनिएको छ । त्रिविभित्रैबाट फेल भएकालाई गोल्ड मेडलिस्ट बनाउने, पीएचडीका सर्टिफिकेट बिक्री हुने,आफैँ विज्ञापन गर्ने, आफैँ प्रश्न बनाउने, आफैँ जाँच लिने, आफैँ उत्तरपुस्तिका जाँच्ने र अन्तर्वार्ता लिएर आफ्नै परिवारका मान्छेलाई जागिर दिनेसम्मको दुष्कर्महरू भएका छन् । तर, यस्ता कुरामा कारवाही कसैलाई भएको देखिएको छैन, भए पनि देखाउनका लागि मात्र भएको छ । यो दुःखद परिस्थिति हो ।
यस्तो बलिया सरकार बनेको बेला चारैतिर आशा, उत्साह, जोस र जाँगरको वातावरण बन्नुपर्ने हो यस्तो राजनीतिक अबस्थाले देशमा निरासा बढ्नुका साथै विकासमा बाधा पुगिरहको छ । त्रिविभित्रैबाट फेल भएकालाई गोल्ड मेडलिस्ट बनाउने सम्मको कल्पनै गर्न नसकिने बेथितिहरू भएका छन । आफैं विज्ञापन गर्ने, आफैँ प्रश्न निकाल्ने, आफैँ जाँच लिने, आफैँ उत्तरपुस्तिका जाँच्ने र अन्तर्वार्ता लिएर आफ्नै परिवारका मान्छेलाई जागिर दिने, बढुवा प्रयोजनका लागि पीएचडी डिग्रीलाई पहिल्यैदेखि दिइँदै आएको नम्बर घटाएर पीएचडी नगर्ने आफैँलाई प्राध्यापकमा बढुवा गर्नेसम्मको दुष्कर्म त्रिविमा भएको छ । यसले विगतमा जस्तै भागबण्डा र आफ्नो निकटका व्यक्तिलाई चयन गर्ने परम्परा तोडिने अवस्था देखिँदैन । बहुमतको स्थिर सरकार हुँदा पनि काम गराइमा हिजोकै शैली अपनाउने कुराले यत्रो ऐतिहासिक परिवर्तनबाट ल्याएको लोकतन्त्र र कम्युनिस्ट सरकारको के अर्थ भन्ने प्रश्न टड्कारो रूपमा उठेको छ । यसको सही उत्तर खोजिनु आजको मुख्य आवश्यकता हो ।